Isibulala-magciwane, ama-Wipe, umkhiqizo wezocansi wabantu abadala - i-Haicheng
Imikhiqizo ye-Yantai Haicheng Sanitary iyakwamukela!
I-Yantai Haicheng Sanitary products Co., Ltd. itholakala e-Yantai City, eSifundazweni saseShandong, eChina, idolobha elihle lolwandle elinezimo eziphakeme ngokwendawo nokuhamba okulula. Le nkampani is ngokukhethekile amagciwane kanye sanitary imikhiqizo ukukhiqizwa amabhizinisi. Ngemuva kweminyaka eyi-17 yentuthuko, sekuyizinto ezahlukahlukene zokubulala amagciwane kanye nama-antimicrobial agents, imikhiqizo yabantu abadala, ama-wipe sanitary namathawula wephepha nolunye uchungechunge lwabakhiqizi bemikhiqizo, kepha futhi nezinto zokwelapha kanye namadivayisi wezokwelapha abahlinzeki abangochwepheshe. sinawo 100000 grade GMP yokuhlanzwa workshop nemishini yokukhiqiza okuzenzakalelayo. Ibuye inelayisense yokufaneleka yokukhiqiza, ilayisense yebhizinisi kanye nokuqinisekiswa okuphelele kokuhlolwa kwemikhiqizo ehlukahlukene.Singanikeza nge-OEM ne-ODM, kubathengi bomhlaba wonke ukuthi basebenze ukubhekana nezidingo zabantu emhlabeni wonke ngazo zonke izici zemikhiqizo yezempilo ezimpilweni zabo zansuku zonke.
Kungani ukhetha i-HaiCheng?
Ifektri yeminyaka eyishumi nesikhombisa
IJapan 、 Hong Kong 、 Southeast Asia njll
Isevisi yokuthengisa ngemuva kokuthengisa ifike ngesikhathi